Iimpawu, ukondla kunye nokuzala kwakhona kweentlanzi iSan Pedro | Ngeentlanzi
Namhlanje kufuneka sithethe ngentlanzi engaqhelekanga. Malunga nayo intlanzi yesan pedro. Kwakhona kwaziwa ngegama eliqhelekileyo leentlanzi zaseSan Martín kunye negama layo lezesayensi UZeyus faber. Elilungu leqela leetafile kwaye lithathwa njengobumnandi kwi-gastronomy, nangona, njengoko kungaziwa kangako malunga neentlobo, ayityiwa njengehlabathi ngokubanzi.
Makhe sifunde ngakumbi malunga nentlanzi yaseSan Pedro!
3 Ukutya iintlanzi eSan Pedro
Le ntlanzi inomzimba oxineneyo macala kunye ne-oval. Umbala umthubi-tyheli womnquma ngokungathi ufakwe ioyile. Ungayibona ipateni yemigca ethe tyaba ukusuka entloko ukuya emsileni inendawo emnyama enkulu emacaleni. Intloko inkulu kunesiqhelo kwaye ineebony ridges kuyo. Nangona intloko inkulu kwaye amehlo ayo ehamba nayo, umlomo wayo mncinci kwaye uyaphuma.
Baziintlanzi abathi bakufikelela ekuvuthweni ngokwesini baphuhlise imisonto emide ngasemva kwemphetho yasemva. Oku kuhlala kusetyenziswa njengophawu kwabo baphandi bazama ukufunda iintlobo kunye nokufumana inqanaba lalo. Inamaxolo amancinci, nangona kwezinye iintlobo azibonakali.
Amehlo atyheli kakhulu kwaye iimpumlo zisondele kakhulu kwaye zinamathele kunye. Into eqhelekileyo yile ubude bayo bokuphila bujikeleze iminyaka eyi-12 kwaye ngeli xesha bufikelela kubude be-60 cm kwaye malunga ne-10 kg yesisindo. Inendlela yokuziphatha eyedwa, nangona ngamanye amaxesha inokubonwa isenza izikolo ukuya kuthi ga kwi-6 okanye kwi-7 iisampulu. Oku kunokubonwa kwixesha lokukhwelana, ukwandisa amathuba okufumana iqabane.
Eyona nto iphambili eyenza ukuba le ntlanzi ibalasele kukubonakala kwayo kubi. Hayi kuba imbi, kodwa kungenxa yeli nqaku, inokungabonakali ixesha elide njengoko abalobi kunye nabathengi bengazikhathazi ngokuzama ukubabamba. Kwakuqheleke ngakumbi ukubamba ezinye iintlanzi ezifana ne-hake, snapper kunye ne-sardines. Nangona kunjalo, ngokuhamba kwexesha, iidinala ezininzi ziye zayingcamla inyama yazo emnandi kwaye zaqaqambisa iintlanzi zaseSan Pedo njengezona zitya zityebileyo. Inyama yayo ithambile, intle kwaye imhlophe kwaye xa ityiwe ithambisa inkalakahla kakhulu.
Ezi ntlanzi zifumaneka kwiindawo ezinzulu zolwandle. Kuqwalaselwa njengohlobo lwe pelagic. Ubunzulu obusezantsi apho ifunyenwe yi-200 m. Ihlala izingela ixhoba layo ingabonwa, kuba iyazingcwaba entlabathini emazantsi olwandle ize inyukele phezulu. Indawo yokuhambisa igubungela phantse zonke iilwandle zehlabathi. Apho kukho uxinzelelo ngakumbi kunokuba indawo ukusuka kuLwandle lweMeditera ukuya kuLwandle oluMnyama. Banokufumaneka nakwiindawo eziseMpuma yeAtlantic ezinje ngeAustralia, Japan, naseNew Zealand.
Singayifumana ngokulula le ntlanzi eSpain ukusuka kwelinye icala usingasiqithi ukuya kolunye. Ukuba sifuna ukuyitya le ntlanzi, kunokwenzeka ukuba sidideke kuba ifumana amagama ahlukeneyo, kuxhomekeke kwindawo esiyi-odola kuyo. Umzekelo, kwilizwe laseBasque waziwa njengo-Muxu Martin. Kule ndawo kuyaziwa kwaye kuyatyiwa ngokuba yintlanzi emnandi.
Ukutya iintlanzi eSan Pedro
Nangona le ntlanzi ingakhange ibonakale iyoyikeka, ifunyanwa iphezulu kwikhonkco lokutya, kunye nezinye izilwanyana. Eyona nto ixhaphakileyo kukuba ukutya kwabo kusekwe kwezinye iintlanzi zeentlobo ezahlukeneyo nakwinqanaba lolutsha. Phakathi kwemenyu oyithandayo kukho isardadi, ii-anchovies kunye nee-arengues. Ukuba ezi ntlanzi azifumani kutya bakuthandayo, banokujikela kokunye ukutya okunje nge-cuttlefish, i-cephalopod mollusks, kunye ne-squid.
Ukuze izingele ixhoba layo, isebenzisa eyona ndlela isebenzayo. Okokuqala, iye izifihle emazantsi olwandle ukuze ingabonwa ize ilibambe ixhoba. Xa ingcwatywa, ishiya kuphela umqolo wayo okanye umqolo ukuze usebenze njengegwegwe yenye intlanzi ekulumayo. Kulapho ayemtsibela khona amgqibe.
Enye indlela ayisebenzisayo ukubamba ukutya kwakhe yindlela apho esiya kumaxhoba akhe kancinci kancinci kwaye bayangxola kubo ngeempumlo zabo bade bagqibe ukubaginya. Ukuba nomzimba omncinci onjalo badada kakhulu.
Ezi ntlanzi zithatha ixesha elide ukufikelela ebudaleni kwaye zinakho ukuzala. Eyona nto iqhelekileyo kukuba bathathe phakathi kweminyaka emi-3 ukuya kwengama-4 ukuze babenabo abantwana babo. Esinye isalathisi sokuvuthwa kwayo bubude bayo. Kufuneka zibephakathi kwama-29 nama-35 cm ukuze bazi ukuba sele zikulungele ukuzala kwakhona.
Bazalisa ii-oviparous. Imazi ibeka amaqanda ayo ize iwakhuphele elwandle. La maqanda kamva achunyiswa yindoda, kukhulula isidoda. Indawo apho bahlala bezala khona kwaye bazala emanzini anzulu, malunga ne-100 yeemitha. Omabini la maqanda kunye nemibungu yi-benthic kwaye banokukhula ezinzulwini de bafumane izakhono zokudada.
Inkqubo yokuvelisa ivame ukwenzeka kwiinyanga zehlobo xa amaqondo obushushu ephezulu kwaye ukutya kuninzi. Kuxhomekeke kubushushu apho amanzi akhoyo, inkqubo yokuchumisa inokwenzeka kwangethuba. Kuloo manzi ashushu Ungayibona intlanzi yaseSan Pedro ngexesha lokuvelisa entwasahlobo.
Iimpawu ezincinci zihamba imigama emide de zifumane indawo efanelekileyo yokubeka amaqanda. Kwelinye icala, ezona zindala zihlala kwiindawo eziqhelekileyo ukwenza ubeko. Kunokuthiwa bayintlanzi yesiko. Xa sele zizalele amaqanda, zinomdla omkhulu kwaye ziqala ukuliqwenga ixhoba ngokukhawuleza. Esi sesinye isizathu sokuba kutheni ukuzalela kwenzeka ehlotyeni.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nentlanzi yaseSan Pedro kunye nokuba ilunge kangakanani kwi-gastronomy.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yaseSan Pedro